2020 ka ibu Afọ Ego zuru ezu na Bursa | RayHaber
[05 / 12 / 2019] Line Serampark Beach Line Tram Line nke Akçaray ịmalite Ọrụ Oji Elu	41 Kocaeli
HomeTurkeyMpaghara Marmara16 Bursa2020 ka ibu Afọ Ego zuru ezu na Bursa
10 / 11 / 2019 16 Bursa, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
afọ ahụ ga-abụ afọ itinye ego zuru ezu
Afọ 2020 ga-abụ afọ zuru oke nke itinye ego na Bursa; Bursa Mayor Alinur Aktaş, onye Minista gburugburu na atụmatụ ime obodo Murat Kurum tụlere ozi ọma maka Bursa na 2020 afọ ga-abụ afọ mkpuchi zuru oke maka Bursa, o kwuru.
Onye isi obodo nke Obodo ukwu Alinur Aktas 31 kwere nkwa banyere mmeghe nke Bazaar na Khans Mpaghara na nnukwu nhazi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ga-eku ume obodo ahụ si na Murat Kurum. N'ime usoro nke nleta ya na Bursa Metropolitan Municipality Encümen Hall na Gọvanọ Yakup Canbolat, ndị omebe iwu na ndị isi ala sokwa na nnọkọ Mịnịsta nke Obodo Minista Alinur Aktaş'dan kwadebere ma gee ntị na ntinye aka nke Minista, Bazaar Mere Ihe Akụkọ na gburugburu mpaghara nke Han. kwupụtara na ha ga-akwado ọrụ ahụ.
Etinye ego itinye ego na egwuregwu n’ọgba n’ihu
Bursa Mayor Alinur Aktaş, onye Minista gburugburu na atụmatụ ime obodo Murat Kurum gara na Bursa na echiche Ankara na Bursa lebara anya. Mayor Aktaş kwuru na Bursa anatala ezigbo ọrụ ruo ugbu a mana ha chọrọ nkwado na ụfọdụ okwu ezughi oke na ezughị oke. Atụrụ m anya na anyị na-eme usoro iwu anyị n’izu na-abịa. Osmangazi district nke Ministry of Sports Büyükorhan'a, Harmancık'a ruo mgbe anyị ruru ozi ọma na anyị ga-enweta ezigbo itinye ego.
N'ịkọwa ụdị obi ụtọ anyị
Maazị Aktaş kwuru na nleta nke Minista gburugburu na Urbanization Murat Kurum rụpụtara nnọọ mkpụrụ maka Bursa wee kwuo, sị: “Anyị ekwela nkwa nke ọrụ dị mkpa maka nchekwa nke usoro akụkọ ihe mere eme na mgbanwe obodo na-esote ma kwadebe ubi nke mba. Anyị kwuru na anyị ga-eme Bursa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na mpaghara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'ezie. TOKI ga-eme ya site na ịdị nkọ. Anyị nwere ọrụ, anyị nwere ọrụ anyị. N’olile anya, anyi gha agba ndi Minister nke Ulo Oru n’oge na adighi anya. Achọrọ m igosipụta nke a akpan akpan. Ndị ụkọchukwu anyị, ndị nnọchi anya anyị, ọkachasị ndị isi obodo ukwu, ọkachasị ndị niile nọ n’obodo Bursa na nnọchite ọkwa anyị kwesịrị inweta nnukwu mgbalị na mkpali. Anyi na-agwa obi uto anyi nye Onye isi ala anyi, ndi ozi anyi. Enwere m olileanya na Bursa ga-enweta ọrụ ndị a otu otu maka ọmụmụ ndị a. Ka Bursa anyị baa uru. ”
Oge ego 2020
Maazị Aktaş chetara na afọ a bụ afọ mgbe a na-eme ntuli aka ime obodo na nke a na-agbatịkwa usoro a site na ọnwa 3. Ak ugbu a atụgharị na nyocha na-agabiga. 2020 ga-abụ afọ zuru ezu nke itinye ego. A ga-eme mmegharị ndị a otu otu, ga-ezute ndị mmadụ na Bursa, Bursa ga-eme ka ndụ dịrị ndị mmadụ mfe, n'aha Bursa ka ọ bụrụ obodo ga-adịkwu mma, ọkachasị n'aha ọrụ ndị a ga-abụ afọ, na-atụ anya 2020 "o kwuru.
Sivas High Speed ​​Train Station na Mahadum
Ibu ụzọ n'ime Bursa's 2020-2024 Strategic Plan…
Turkey ntụkwasị obi zuru ezu nke mba investors na Bursa
Ụlọ Ahịa Nchekwa Azụmahịa zuru ezu na-aga n'ihu na Gas zuru ezu
Etinye njem na mpaghara Bursa Hız
Nchịkwa ego njem Izmir na-enweta oke nke ọdụm na mmefu ego nke 2020
Onye nlekọta na-eme njem n'okporo ụzọ nke Bursa
Ụgbọ njem na Kayseri
Oge ọzọ dị mkpa dị na Malatya South Belt Road…
Arslan, Bursa Investments na okporo ụzọ…
Na 2020 Year Airbus, 2,5 ijeri Turkey ...
Ọdụ ụgbọ okporo ígwè 4 dị elu nke Bursa
Ọ bụ ihe ntụrụndụ ịbụ onye mbụ njem nke Tram Tram
Expedia chọrọ ka ike na egwu
Line Serampark Beach Line Tram Line nke Akçaray ịmalite Ọrụ Oji Elu